`လ´တစ်စင်းသာနေတာ တွေ့လိုက်တယ်… ။
Posted by white crystal at 15:503comments
ဒီဇာတ်လမ်းလေးမှာ လွမ်းခန်းတွေတော့ ရှိခဲ့တယ်
ဒါပေမယ့် ကြမ်းခန်း ရမ်းခန်းတွေ မပါခဲ့ဘူး…
ဒီဇာတ်လမ်းလေးမှာ ငိုကြွေးခြင်းတွေ ရှိခဲ့တယ်
ဒါပေမယ့် ကျိန်စာတွေ မဆိုခဲ့ဘူး…
ဒီဇာတ်လမ်းလေးမှာ တမ်းတမှုတွေ ရှိခဲ့တယ်
ဒါပေမယ့် နာကျည်းခြင်းတွေ မထားခဲ့ဘူး…
ဒီဇာတ်လမ်းလေးမှာ မျှော်လင့်ခြင်းတွေ ရှိခဲ့တယ်
ဒါပေမယ့် ဖြားယောင်းမှုတွေ မလုပ်ခဲ့ဘူး…
ဒီဇာတ်လမ်းလေးမှာ ချစ်ခြင်းရနံ့တွေ သင်းပျံ့ခဲ့ဖူးတယ်
ဒါပေမယ့် အမုန်းဆိုတာ မလိုအပ်ခဲ့ဘူး…
ဒီဇာတ်လမ်းလေးမှာ သံယောဇဉ်တွေ ထားခဲ့တယ်
ဒါပေမယ့် နှောင်ကြိုးတွေတော့ မချည်ခဲ့ဘူး…
ဒီဇာတ်လမ်းလေးမှာ ပုံစံတမျိုးနဲ့ ခွဲခွာခြင်းတွေ ရှိခဲ့တယ်
ဒါပေမယ့် နှုတ်ဆက်တေးတွေ မဆိုခဲ့ဘူး…
Posted by white crystal at 11:104comments
အဝေးကိုလွင့်သွားတဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်းတိမ်တိုက်အတွက် ၀မ်းနည်းငိုကြွေးနေလို့ရော ဘာများ ပိုထူးလာမှာလဲ..
နောက်တခါ လေပြည်လာချိန်မှာ ပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့ ရနံ့တွေ အနားကို ပျံ့လွင့်လာဦးမှာပါ…
အရိပ်လိုလိုက်နေတဲ့ အတိတ်မှာ ကြေကွဲခြင်းတွေ စွန်းပေနေတာ ဖျောက်ဖျက်လို့ မရနိုင်ပါဘူး…
ဒါပေမယ့် တချိန်မှာတော့ အတိတ်ဆိုတာ ဆေးသားပြယ်လွင့်သွားတဲ့ ပန်းချီကားတစ်ချပ်လို မှုန်ဝါးလွင့်ပါးသွားမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ထားချင်တယ်…
ချစ်ခဲ့တဲ့ အချစ်တွေအတွက် နောင်တဆိုတာ မရှိပေမယ့် နှိုင်းဆပြလို့ မရနိုင်တဲ့ နာကျင်မှုတွေတော့ ရှိခဲ့တယ်…
မျှော်မှန်းဖူးခဲ့တဲ့ အနာဂတ်ခရီးဆိုတာလဲ ဟိုးဝေးဝေးမှာ မှိန်ဖျော့စွာနဲ့ တစစီ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပေါ့…
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကုန်လွန်ခဲ့တဲ့ ခဏတာ အချိန်လေးမှာ အဆုံးအစမဲ့ ကြည်နူးခဲ့တာ ၀န်ခံပါရစေ…
ဒါပေမယ့်လဲ ချစ်ခြင်းအတိုင်းအဆနဲ့ အချိန်ကာလ ထပ်တူ အချိုးမကျနိုင်ဘူးဆိုတာ သေချာလွန်းနေခဲ့တော့လဲ…
ဒဏ်ရာတွေသာ တနေ့တခြား ရင်ထဲမှာ ပိုမို များပြားလာခဲ့…
မာယာလို့ မပြောရက်ပါဘူး… သာယာခဲ့မိတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲ အပြစ်တင်လိုက်တော့မယ်…
အတိတ်နေ့ရက်တွေမှာ အရူးအမူးပျော်ခဲ့ဖူးတော့ အခုအချိန်မှာ ရူးရူးမူးမူး လွမ်းလိုက်ဦးပေါ့…
ကိုယ်တိုင်က မနိုးထချင်သရွေ့ အိပ်မက်ဆိုးရဲ့ ဖမ်းစားမှုမှာ ကျိ်န်စာသင့်နေဦးမှာပါပဲ…
တကယ်လို့များ… မနက်ခင်းတစ်ခုမှာ ငှက်ကလေးရဲ့ တေးသီသံသဲ့သဲ့ကို ကြားမိတယ် ဆိုရင်တော့ အတိတ်အိပ်မက်ကနေ အမြန်နိုးထ.. ရင်ခုန်သံအစစ်တွေနဲ့ ဘ၀ခရီးသစ်ကို စတင် လိုက်ပါတော့…
မှောင်မိုက်တဲ့ အလွမ်းညတွေ အဆုံးမှာ လင်းသစ်တောက်ပတဲ့ ဖြူလွလွ နေ့ရက်တွေက စောင့်ကြိုလျက်သာ…. ။
Posted by white crystal at 14:450comments
လွမ်းလို့ကောင်းနေတုန်းမို့ပါ … ။
( သူငယ်ချင်း မိုးလှိုင်ည ပေးတဲ့ အတွေးတပိုင်းတစနဲ့ ခံစားချက် အပိုင်းအစတွေ ပေါင်းပြီး ရေးဖြစ်သွားတဲ့ ကဗျာလေးပါ )
Posted by white crystal at 10:333comments
အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာ ဖယောင်းတိုင်လေးတိုင် ထွန်းလင်းနေကြတယ်။ သူတို့ဟာ ဘယ်သူမှ မကြားနိုင်တဲ့ လေသံနဲ့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် စကားတွေပြောလို့ …
ပထမ ဖယောင်းတိုင်ရဲ့နာမည်က ငြိမ်းချမ်းရေး တဲ့… ။ သူက အခြားဖယောင်းတိုင်တွေကို စ ပြောတယ်။
`ဘယ်သူမှ ငါ့ကို မထိန်းသိမ်းကြတော့လဲ.. ငါ ပျောက်ကွယ်ရတော့မှာပဲလေ…´
သူက ပြောရင်းဆိုရင်းပဲ … လုံးဝ ငြိမ်းသွားတယ် … ။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ ယုံကြည်မှု လို့ အမည်ရတဲ့ ဖယောင်းတိုင်လေးက ဆက်ပြောတယ်။
`ငြိမ်းချမ်းခြင်း မရှိတော့တဲ့နောက်မှာ ငါလဲ ဘယ်သူ့ကိုမှ မျှဝေပေးနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ ဆက်လက်ထွန်းလင်းနေရတာ အဓိပ္ပါယ်မရှိတော့ဘူးလို့ ထင်လာပြီ … ´
သူ့စကား မဆုံးသေးခင်မှာပဲ ညင်သာတဲ့ လေညင်းလေးက သူ့ကို တိုက်ခတ်ငြှိမ်းသတ်သွားတယ်။
တတိယ ဖယောင်းတိုင်လေးကတော့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဖြစ်တယ်။ သူကလဲ ၀မ်းပမ်းတနည်းနဲ့ …
`ငါလဲ ဆက်လက်ထွန်းလင်းဖို့အတွက် အားအင်တွေ ခြောက်ခမ်းကုန်ပြီ … လူတွေက ငါ့ရဲ့ အရေးပါမှုကို မသိကြဘဲ ငါ့ကို ဘေးဖယ်ထားကြတယ်။ သူတို့ရဲ့ အနီးဆုံးမှာ ရှိကြတဲ့သူတွေကိုတောင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ ပေးကြဖို့ သူတို့ မေ့နေကြပြီ…´
သူလဲ အဲဒီစကားရဲ့ အဆုံးမှာပဲ ထွန်းလင်းမှုတွေ ရပ်သွားခဲ့တယ်။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ ကောင်လေးတစ်ယောက် အခန်းထဲကို ၀င်လာတယ်။ ဖယောင်းတိုင်လေးချောင်းမှာ သုံးချောင်းက ငြိမ်းပြီး တစ်ချောင်းတည်း ထွန်းလင်းနေသေးတာကို သူတွေ့လိုက်ပြီး စိတ်ညစ်သွားတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ နောက်ဆုံးထွန်းလင်းနေသေးတဲ့ ဖယောင်းတိုင်လေးက ကောင်လေးကြားအောင် လေသံကိုမြှင့်ပြီး ပြောလိုက်တယ်။
`စိတ်မညစ်ပါနဲ့ ကလေးရယ် … ငါ ထွန်းလင်းနေသေးသရွေ့ မင်း သူတို့ကို ပြန်ပြီး ထွန်းညှိပေးလို့ ရပါသေးတယ်…´
အဲဒီစကားသံကိုကြားတော့ ကောင်လေးလဲ ကျန်နေသေးတဲ့ ဖယောင်းတိုင်လေးတစ်ချောင်းကို ယူပြီး ငြိမ်းနေတဲ့ ဖယောင်းတိုင်လေးတွေကို လိုက်ပြီး မီးညှိလိုက်တယ်။ အခုတော့ အခန်းလေးထဲမှာ ဖယောင်းတိုင်လေးတိုင်လုံး ထွန်းလင်းနေကြပါပြီ။
အဲ … နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ ဖယောင်းတိုင်လေးရဲ့ နာမည်က မျှော်လင့်ချက် တဲ့ … ။
( ကိုနေဘုန်းလတ်၏ `စကားပြောသော ပုံပြင်များ´ ပို့စ်မှ ပြန်လည် ကူးယူဖော်ပြပါသည်။ )
Posted by white crystal at 13:210comments
Labels: နှစ်သက်သော စာ
မောင်လေးအတွက် ( ၁ )
မောင်လေးရေ… ဒီရက်တွေဟာ မောင်လေးဘ၀မှာ အရမ်းကို ခက်ခဲပင်ပန်းမယ့် နေ့ရက်တွေဆိုတာ မကြီး သိပါတယ်။ ကင်ဆာ ဆိုတဲ့ အရိပ်မည်းကြီးအောက်မှာ နေ့ရက်တွေကို ဖြတ်သန်းရတာ ဘယ်လောက် ကြမ်းတမ်းမယ်ဆိုတာ သိထားတဲ့ ဆေးပညာ ဗဟုသုတ အနည်းအပါးနဲ့တင် နားလည် ခံစားပေးလို့ ရပါတယ်။ မောင်လေးအတွက် ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ ဆိုတာလဲ မကြီး ခေါင်းထဲမှာ အမြဲတွေးနေမိတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ့်လက်တွေ့မှာတော့ ဘာမှ ထိထိရောက်ရောက် လုပ်မပေးနိုင်သေးဘူးနော်..်။ အဲဒီအတွက် မကြီး အရမ်းဝမ်းနည်းနေမိတယ်။ ပြီးတော့ အခြေအနေအားလုံးကို သိနားလည်ထားတဲ့ မောင်လေးကို အပေါ်ယံစကားလုံးတွေနဲ့ အားပေးနှစ်သိမ့်ခြင်းဟာ အသုံးမ၀င်နိုင်ဘူးဆိုတာလဲ မကြီး သိထားတယ်။ အခုအချိန်မှာ မောင်လေးအတွက် အလိုအပ်ဆုံးက ရှေ့လာမယ့် နေ့ရက်တွေကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ အသက်သာဆုံးဖြစ်အောင် ဖြတ်သန်းသွားမလဲ၊ လက်ရှိအနေအထားကို အမှန်အတိုင်းလက်ခံပြီး လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဘယ်လိုပြန်တိုးဝင်မလဲ ဆိုတာ မဟုတ်လား။ အဲဒီအတွက် မကြီး တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပေးမယ်နော်…။ အဓိကက မောင်လေးကိုယ်တိုင် စိတ်ဓါတ်ကြံ့ခိုင်နေဖို့ပဲ လိုတာ… အားတင်းထားနော် မောင်လေး… ။
Posted by white crystal at 11:220comments
ကြွရွနီဝေ၊ မကြွေခင်တော့ ပြန်ခဲ့မယ်။
ရှေ့နောက် ၀ဲယာ၊ မမြင်သာဘူး
ဝေး… ဝေး… ဝေးရှာ…။
မေ့မျက်ဝန်းထဲ၊ နှင်း… ဝေဆဲကွယ်။
( ၁၉၈၂ ၊ ရှုမ၀ )
Posted by white crystal at 10:530comments
Labels: နှစ်သက်သော ကဗျာ
နှစ်သက်သော ကဗျာ (1)
နှစ်သက်သော စာ (1)
ဘ၀ကို ရိုးရှင်းအေးချမ်းစွာ ဖြတ်သန်းလိုသူ...
ကလူ ..... ကလူ လို့
သူ့ကိုမှ ခွင့်လွှတ်နားလည် နိုင်သေးရင်
ကျန်တဲ့သူတွေကို ဘာမှပြောစရာမရှိဘူး မဟုတ်လား…
zue zue ( ရင်မှ မိုးစက်ပွင့်များ )
မြေမှုန်လွင် ( EXIT POETRY )
idulize ( အရုပ်ကလေး )
ကြယ်မျှားသူရဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက် © 2008. Template Design By: SkinCorner